Akwụkwọ: Nwere ike ndị mmadụ na-agụ Email Gị? | Martech Zone
Litmus: Nwere ike ndị mmadụ na-agụ Email Gị?
Tọzdee, Nọvemba 21, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị na-na na focusing le… er… mkpu banyere mobile nke mbubreyo na m nwere olileanya na anyị na-na-gị ntị. Ọ bụrụ n’ị mee otu ihe taa, ọ kwesịrị ịbụ iji nwalee ozi email gị nke ị na-ezipụ site na onye na-ere email gị iji hụ ma ndị mmadụ nwere ike ịgụ ha.
Dị ka anyị mepụtara isi ndebiri ndebiri maka anyị email maka WordPress ngwọta, CircuPress, iwulite nzaghachi email na-agbanwe agbanwe, gbanwee, ma rụọ ọrụ n'ofe plethora nke ndị ahịa email abụghị ihe na-agwụ ike. Anyị malitere ụfọdụ free na-anabata email ndebiri si Zurb.
Mgbe oge ruru iji chepụta CircuPress anyị na-achọ, kwa ụbọchị na kwa izu, anyị hapụrụ ma goro ndị ọkachamara ọrụ Ndị mọnk Email ime ya. Ndị mọnk Email nwere ihe karịrị 100 mara mma, ndebiri ozi email kachasị mma na ị nwere ike ịzụta ozugbo na saịtị ha ma ọ bụrụ na ịnweghị nhazi emegoro.
Tinyere ndebiri email anyị, ndị mọnk Email na-enyekwa anyị nke anyị Litmus na-akọ nke ahụ nyere anyị screenshots nke ọ bụla n'ime ozi ịntanetị anyị dị iche iche desktọọpụ, mobile na web-dabeere ahịa ahịa. Enwere ike ịpị nke ọ bụla ma banye n'ime ya n'otu n'otu:
Ohere bụ na ị na-etinye ọtụtụ ego na-agbapụ ozi email nke nwere ike ịgụta na ọtụtụ ngwaọrụ. Ihe kariri ọkara nke mmadụ niile na-enyocha email na ngwaọrụ mkpanaka ha - okpokoro okpokoro ochie gị na-enweghị nzaghachi nwere ike ịdaba na ahịhịa. Jiri ụfọdụ nwalee Litmus iji hụ!
Tags: Email (gam akporo)email imeweemail Marketingndị mọnk emailNtinye 2004Ntinye 2008Gmail (gam akporo)Gmail (Desktọpụ)Gmail (iOS)Gmail (Mobile)Hotmail (Desktọpụ) Hotmail (Mobile) ThunderbirdlitmusLive LiveOzi (iOS)Ozi (OSX)Outlook 2003Outlook 2007Outlook 2010Outlook 2011 maka MacOutlook 2013Outlook Expressemail na-anabataNWA (Desktọpụ)Nza (iOS)Ozi WindowsYahoo Mail (Desktọpụ)Yahoo Mail (Ekwentị)
Randomize gị WordPress akụkọ mfe
Commun.it: Mfe Njikwa Obodo Twitter
Nov 22, 2013 na 6:21 AM
Chaị!! Dị nnọọ egwu kpamkpam ụtọ mgbe gafere post. Kwesịrị ikwu post ọkachamara. Bara uru nye m.